नेपाली रजतपटमा दोहोरिएको संकट ! -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
नेपाली रजतपटमा दोहोरिएको संकट !
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लगातार जसो फिल्महरु असफल भइरहनु र कतिपय अवस्थामा हलमा फिल्म नै नहुनुले फिल्म क्षेत्रमा फेरी संकट आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसरी संकट आउनुका पछाडि अहिले पनि धेरै फिल्मकर्मीको रेडिमेड जवाफ छ –‘सबै फिल्म सफल हुँदैनन् ।’
तर सबै फिल्म सफल हुँदैनन् भने पनि हलमा यसरी दर्शकको खडेरी परेको पहिलो पटक भने होइन । २०६८ सालमा पनि यही संकटबाट फिल्म क्षेत्र गुज्रिएको थियो । जतिबेला निश्चल बस्नेतको ‘लुट’ले नेपाली फिल्म उद्योगको उद्धार गर्यो। चलचित्र विकास बोर्डले संकटकाल घोषणा गर्नै लागेका बेला ‘लुट’ले तहल्का पिटेको थियो । सो फिल्म नेपाली रजतपटमा ट्रेण्ड ब्रेकरको रुपमा देखा पर्यो ।
लुटले नै सौगात मल्ल र दयाहाङ राईलाई नेपाली फिल्मका नयाँ स्टार बनाएको हो । निश्चल बस्नेत भने स्टार निर्देशक भए । संकटकाल लाग्नबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रको उद्धार गरेका तीनै जना स्टार सौगात, दयाहाङ र निश्चल अहिले ‘ कमर्सियल फ्लप’ छन् । अर्थात् उनीहरु पनि अहिले संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुको जादु चल्न छाडेको छ ।
प्रमाणका रुपमा ‘घामड शेरे’ र ‘माछा माछा’ नै काफी हुन्छ । ‘घामड शेरे’ले निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्कालाई ठूलै झट्का लाग्यो । फिल्म चल्ने विश्वास लिइएको बेला फिल्म चल्न सकेन । त्यस्तै, ‘माछा माछा’ले दयाहाङ र सौगातलाई ‘भ्यागुता’ बनाइदियो । गएको वर्ष फिल्म ‘बुलबुल’ बाट उत्कृष्ट अभिनेत्री बनेकी स्वस्तिमा ‘घामड शेरे’का कारण ‘फ्लप’ बनिन् ।
‘घामड शेरे’मात्र होइन यस अघि उनी अभिनित फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ पनि फ्लप फिल्मको सूचीमा पुगेको थियो । त्यस्तै स्टार निर्देशकको रुपमा उदाएका निश्चल बस्नेत पनि सेलाएका छन् । उनी अभिनित फिल्म फ्लप त भए उनको निर्देशन पनि बिक्न छाडेको छ । ‘टलक जंग भर्सेज टुल्के’ र ‘लुट २’ हेरे पुग्छ उनको निर्देशकीय क्षमता पनि बिक्न छाडेको हो ।
‘टलक जंग भर्सेज टुल्के’ समीक्षात्मक रुपमा केही रुचाइएको फिल्म हो । उनले ‘लुट’ पछि सोही प्रकारको सफलता पाउन नसक्नुमा त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको फिल्मको अपेक्षा रहेको र त्यो अपेक्षा पुरा नभएको पनि भनिन्छ ।
संकट दाहोरिएकै हो त ?
एक किसिमको संकट देखा पर्यो , सोच्नुपर्ने अवस्था आयो चलचित्र पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा समीक्षक शान्तिप्रिय अहिले एक किसिमको संकट देखा परेको बताउँछन् र यो सोचनीय विषय रहेको बताउँछन् । ‘विश्वभर नै ५ प्रतिशत फिल्म सफल हुने हो । हाम्रोमा पनि फिल्महरु चलेका छन्, तर महिनाभरि फिल्म नै हलमा नहुन चाँही सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।’
फिल्म क्षेत्र आँफैमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएकोले उतार–चढाव हुनु स्वभाविक हो । के कारणले संकटको खतरा रह्यो त ? नेपाली फिल्मको मेकिङमा सुधार नभएकोले यो अवस्था आएको उनको मत छ । ‘१० वर्षमा दर्शक परवर्तन हुन्छन्, तर हामीले फिल्म परिवर्तन गरेनौँ, उही कन्टेन्टमा उस्तै–उस्तै खालको फिल्म बनाइरह्यौं । फिल्ममा ब्रेक थ्रु चाहिन्छ तर, त्यो देखिँदैन ।’
उनले अनावश्यक संकट उन्मुख अवस्था आउनुमा फिल्म निर्माण, फिल्म छनोट प्रक्रिया नै गलत, विषवस्तु गलत, लार्पवाही फिल्महरु बन्नु, प्रदर्शनको तालिका भद्रगोल हुनु, राम्रा फिल्महरु जुध्ने साना मानिएका फिल्महरु भाग्ने प्रवृति लगायतका कारणहरु हुन सक्ने औँल्याए । ‘राम्रा फिल्महरुलाई व्यवस्थित रुपमा लगाउन सकिएको खण्डमा फिल्महरु चल्छन् ।
ठ्याक्कै यही कारण हो भन्ने थाहा भए हरेकले राम्रा फिल्महरु बनाउथे । र पनि यस्ता विभिन्न कारणहरु हुन सक्छ ।’ उनले थपे । लगातार जसो उस्तै फिल्ममा दर्शकको रुची कम हुने शान्तिप्रियको मत छ । उनी भन्छन्, ‘एउटा चल्छ दुईटा चल्छ, जसले ब्रेक गर्छ त्यो चल्छ ।
‘कन्टेन्ट एउटै हुने निर्माण पद्धती एउटै हुने, हलिउडको प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने उस्तै उस्तै खालको फिल्म दर्शकले किन हेर्ने ?’ प्रविधिको परिवर्तनले दर्शकहरुलाई पनि सहज भएको छ घरमै बसि–बसि फिल्म हेर्न पाइन्छ त्यस कारण दर्शक हलसम्म आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
दर्शक हलसम्म आउँदैनन भन्ने होइन । हलिउड बलिउड फिल्म हेर्न जान्छन भने नेपाली फिल्म हेर्न किन जाँदैनन ? अब, केही न केही परिवर्तन जरुरी छ ।’ पुष महिनामा फिल्म नहुनु अचम्म भएको शान्तिप्रिय बताउँछन् ।
फिल्म क्षेत्र परिवर्तनको संघारमा
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी अहिले नेपाली फिल्म क्षेत्र संकटमा रहेको भन्दा पनि परिवर्तनको संघारमा रहेको बताउँछन् । केही वर्ष पहिले मुलधारको फिल्म बनाइरहेका फिल्म मेकर बीचमा निराश भए । यसबीचमा गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक रुपमा फिल्महरु बढी भए । फिल्म क्षेत्रमा यो धराशायी अवस्था आउने पहिल्यै सोचिसकेको अधिकारी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘फिल्म भनेको फिल्म हो । अहिले प्रविधिको परिवर्तनले मनोरञ्जनका विभिन्न खुराक सहज रुपमा दर्शकको पहुँचमा छ त्यसलाई उछिन्नको लागि राम्रो र स्तरीय फिल्म बन्नु¥यो ।’ कमजोरी कहाँ छ ? अधिकारी भन्छन्, ‘डकुमेन्ट्री फिल्महरु पनि हलमा लागिरहेको छ । फिल्म फेस्टिवलमा जानुपर्ने फिल्महरु मुलधार र कमर्सियल फिल्महरुको रुपमा पर्दामा आइरहेको छ ।
प्रयोग बढी भइरहेको छ, दर्शकलाई धान्ने भनेको मनोरञ्जन–मनोरञ्जन– मनोरञ्जन नै हो । कुन विषय उठाएर मनोरञ्जन दिने त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो प्याटर्न दर्शकले पाइरहेका छैनन् ।’ परिवर्तनको संघारमा रहेको फिल्म उद्योगमा वर्ष २०७७ को लागि केही वर्ष देखि तयारी भइरहेको उनले बताए । अधिकारी थप्छन्, ‘हिजोको दिनमा जुन फिल्म मेकरहरु थिए त्यही नै मेकरहरु चाहिन्छ ।
प्रयोगले उद्योग चल्दैन । फिल्मको क्यानभासमा रंग रोगन गर्नुभन्दा पनि स्केचमात्र बनाएर दर्शकलाई देखाएर के मनोरञ्जन पाउँछन ?’ फिल्मलाई पूर्ण बनाउने विविध पक्षहरु पनि सबल हुनुपर्ने उनको मत छ, ‘फिल्मको स्केच मात्र बनाउने हो भने पुस्तक लेखेर दर्शकको हातमा दिए हुन्छ ।’ उनले भने ।
फिल्म क्षेत्रमा दर्शकलाई निराश बनाउने कारण के छ त ? अधिकारी भछन्, ‘दर्शकले हलिउड र बलिउड हेरिरहेका छन्, नेपाली फिल्ममा त्यो किसिमको स्तरीयता छैन । स्तरीयता दिने मेकरहरुले पर्ख र हेर भनिरहेका छन् । यसबीचमा तीन चार किसिमा फिल्म मेकरको उदय भयो । अर्काको पैसा लगाएर फिल्म बनाइदिने ।
एउटा पक्ष अनेक गरेर फिल्म बनाउँदा बनाउँदै पैसा कमाइदिने । निर्माता डुबे डुबोस भन्ने, यसले निर्मातामात्र होइन उद्योग नै डुब्न लागेको छ । २०६८ सालको संकट पछि फिल्म हलले प्रविधिको हिसाबमा फड्को मारेको हो । डिजिटल रुपमा परिवर्तन आएपछि दर्शकको चाप बढ्न थालेको छ ।’
संकटको समाधान के छ भन्ने प्रसंगमा ‘अहिले फिल्मको नाममा जस्तोसुकै खुराक हलमा देखाइरहेका छौँ, त्यसकारण फेरी पनि दर्शक घट्दै गइरहेका छन् । यो संकट भन्दा पनि फिल्टर हुन लागेको हो । अब बन्ने फिल्म राम्रो बन्छन् । दर्शकको विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा विश्वास जित्न समय लाग्छ । मुलधारका फिल्म मेकर पुनः फर्कनु पर्छ र फिल्मलाई फिल्म हो भन्ने बनाएपछि मात्र संकट टर्छ ।’ अधिकारीले भने ।
टंकको स्वरमा सरोज र आश्मा (भिडियो)
ताराको यादमा तड्पिएका जीवन (भिडियो)
‘मेरो दिल’ को उनी र म (भिडियो)